ISAHLUKO 11: I-POLAR TRACE - I-Geofumed
ISAHLUKO 11: YOKULANDELELA polar
Masibuyele kwibhokisi yencoko ye "Drawing Parameters". Ithebhu ye "Polar tracking" ikuvumela ukuba uqwalasele umxholo wegama elinye. "Polar Scan", kufana "izinto Tracking reference", yenza kwimigca echokoziweyo, kodwa kuphela xa isalathisi iwela engile elikhankanyiweyo, okanye kwandisa ubhekise ukusuka uququzelelo (X = 0, Y = 0), okanye iphuzu lokugqibela elibonisiweyo.
Nge "Reference Reference" kunye ne "Polar Tracking" esebenzayo, i-Autocad ibonisa imizila yokulandelela kwiibhola ezichazwe kwibhokisi yencoko. Kule meko, unikezelwe ukulungiswa kwevidiyo yangaphambili, ukususela kwindawo yokugqibela esetyenzisiweyo. Ukuba sifuna ukuba ibonise imigca yokulandelela kwii-angles ezahlukeneyo, ngoko sinokuyongeza kwoluhlu kwibhokisi yencoko.
Ngokufanayo "Ukulandelela inkalo", "Ukulandelela kweepolisi" kwakhona kuvumela ukubonisa enye into echaziweyo kwaye iya kubonisa indlela yokubambisana kwimizila yokulandelela i-polar elandelwayo. Ngamanye amazwi, lo msebenzi osemqoka, xa isixhobo sokuzoba into entsha, sinako umbonise ukuba kuthethwa into ( "sokugcina", "ukucofa", "iziko", njalo njalo) kunye ziyaphuma zithwala emboxo; ngoko sibhekisela kwenye inkcazelo yesinye into, apho siza kubona iziphambano zengqungquthela ezivela ekulandeleni kwamanqaku amabini.
Ngoko ke, siya kugxininisa inyaniso yokuba ezi 3 izixhobo joint, "ivele", "umkhondo ..." yaye "Polar umkhondo" ukuvumela ukuba ukujikelezisa geometry we izinto ezintsha ngokukhawuleza kakhulu oko sele zithathwa kunye nasekufeni ngokuchanekileyo.
Post edlulileyo«Edlulileyo 10 ISAHLUKO: YOKULANDELELA osnap
Post Next ISAHLUKO 12: Ukunqongophala parametricOkulandelayo "